​भद्रपुरको विद्युत् सेवा अवरुद्ध
भद्रपुर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भद्रपुर शाखाबाट वितरीत हुने स्थानहरुमा आज बिहानदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ। शाखाको पुरानो सवस्टेसनलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेकाले विद्युत् लाइन काटिएको कार्यालय प्रमुख रोशन खड्काले..
​नयाँ नोटदेखि खसीसम्म पाइने दसैं महोत्सव असोजको पहिलो साता
काठमाडौं । सिटी रेबान पोखराले आगामी असोज २२ देखि कात्तिक २ गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा ‘चौथो सिटी रेवान दसैँ महोत्सव’ गर्ने भएको छ। महोत्सवमा दसैँका लागि आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु नयांँ नोटदेखि खाद्यान्न,..
​सरकारी सहुलियत मूल्य नै महँगो भएपछि चामल बिक्री हुनै छाड्यो
ताप्लेजुङ । बजार मूल्यभन्दा महँगो भए पछि ताप्लेजुङमा रहेको खाद्य संस्थानको चामल बिक्री अघिल्लो आवको तुलनामा झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। संस्थानको शाखा कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार आव २०७०/७१ मा दुई..
​जलविद्युतको जिल्ला बन्दै लमजुङ, १५७ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माणधिन
छविलाल बगाले लमजुङ । जलविद्युत्को धनी जिल्ला लमजुङमा अहिले ६ आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी सबै आयोजनाको जडित क्षमता १५७ मेगावाट छ । राज्यले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत्..
काठमाडौँ । उपत्यकामा प्लास्टिक झोला निषेध गरेपछि वातावरण विभागले पहिलोपटक बिहीबारबाट उपत्यकाका प्लास्टिक उद्योगमै अनुगमन सुरु गर्ने भएको छ । थोक र खुद्रा प्लास्टिक व्यापारीकोमा मात्र अनुगमन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि..
​सुनको भाउ ५ सय रुपैयाँले घटेयो, तोलाको ५० हजार ५ सय रुपैया
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनको भाउ ओरालो लाग्न थालेको छ । निरन्तर उकालो लागिरहेको सुन मंगलबारदेखि पुनः ओरालो लाग्न थालेको हो । बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ५ सय रुपैयाँ घटेको छ..
​काबेली करिडोर प्रशारण लाइनको परीक्षण सकियो
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपालीहरुको प्रवर्द्वनमा निर्माणाधीन २२ मेगावाटको सानिमा माई जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत वितरणका लागि प्रसारण लाईनमा परिक्षण सकिएको छ । १३२ केभीएको प्रसारण लाईनमा सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको..
मोरङ । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दललगायतको निरन्तरको बन्दका कारण सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरसहित पूर्वाञ्चलमा दैनिक करिब चार अर्बको नोक्सान हुने गरेको छ । एकपछि अर्को राजनीतिक दल र गैरराजनीतिक समूहले बन्द आह्वान..
​डलर महँगिदै १ सय ७ रुपैयाँनजिक
काठमाडौं दैनिकजसो बढ्दै गएको अमेरिकी डलरको भाउ १ सय ७ रुपैयाँनजिक पुगेको छ। यो २ वर्ष यताकै महँगो भाउ हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवारका लागि डलरको विक्रीदर मूल्य १ सय..
​नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौँ । रक्सौल—अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसम्बन्धी सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकार र भारत सरकार विच सोमबार बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पाइपलाइन विस्तारगर्ने सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।..
पाइपलाइन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतीय मन्त्री नेपालमा
काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन विस्तारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान लगायतको टोली आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच सोमबार वाणिज्य मन्त्रालयमा..
काठमाडौँ । नेपाल बन्दको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डला क्षेत्रको सडकमा उद्योगीले जुत्ता तथा चप्पल उत्पादन गरेका छन् । नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग व्यवसायी सङ्घले बन्दको आह्वान गर्ने दल तथा विभिन्न सङ्घसंस्थालाई..
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच थप तीनवटा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालबीचको व्यापार सहजीकरण समितिको शनिबार सम्पन्न छैंठौ बैठकमा नेपालले राखेको प्रस्तावमा..
काठमाडौं । मुद्रण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महाङ्ंघले पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्माबाट निजी क्षेत्रलाई हटाएर साझा र जनक शिक्षालाइ दिने भनि मङ्गलबार अखबारमा प्रकाशित भएको समाचार प्रति ध्यानाकर्षण भएको..
रमेश लम्साल, काठमाडौँ, । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०७१र७२ मा छ अर्ब ५१ करोड ४० हजार रुपैयाँँ घाटा बेहोरेको छ । प्राधिकरणले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्मको घाटा २६ अर्ब..
काठमाडौं । विश्वप्रशिद्ध ‘छिन्ताओ ब्रुअरी कं.’को ११२औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर ‘छिन्ताओ वियर’ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । अधिकृत बिकेता, “लभ्ली बेभरेज”ले ‘छिन्ताओ’ ब्राण्डका ६४० मी. ली. र ३३० मी. ली...
‘पपैया’ खरिद गरेर ७ जनाले पाए स्कुटर
काठमाडौं । सौन्दर्य प्रशाधन उत्पादक कम्पनी ‘जोय’ले उपहार योजनाबाट छानिएका ७ जनालाई स्कुटर प्रदान गरेको छ । जोय कम्पनीले ‘पपैया सन’को खरिदपछि प्राप्त कोड नम्बर एसएमएस गरी उपहार योजनामा सहभागी भइ..
बुटवल पावरले कमायो ५२ करोड, प्रति शेयर आम्दानी ३१ रुपैंया
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५२ करोड २२ लाख १७ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३० करोड ३७ लाख ६८..
​पश्चिममा पेट्रोलको चर्को अभाव
भीमदत्तनगर । लगातार पाँच दिनदेखिको बन्दले कैलाली र कञ्चनपुरमा पेट्रोलको अभाव भएको छ। विभिन्न पक्षले आ–आफ्ना माग राख्दै आह्वान गरेको बन्दका कारण कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, सुडा, दैजी, झलारी र कैलालीको अत्तरिया, धनगढी,..
​तोकिएभन्दा १९ दशमलव नौ प्रतिशतले राजस्वमा वृद्धि
काठमाडौ । गत आवमा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाउन सफल भएको छ। विभागले सो आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ६० अर्ब नौ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ। विभागले एक..
​सुनचाँदीको भाउ उकालो लाग्ने क्रम जारी
काठमाडौं । स्थानिय बजारमा बिहीबार पनि सुनचाँदीको भाउ उकालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । साताको दोस्रो दिनदेखि सुनचाँदीको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ४ सय..
​निजी क्षेत्रको दुखेसो–‘दलहरुले हाम्रो कुरा सुनेनन्’
काठमाडौं । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा निजी क्षेत्रले दिएको साझा सुझाव दलहरुल नसुनेको भन्दै निजी क्षेत्रले दुखेसो गरेको छ । उनीहरुले आफूहरुको अपिललाई गम्भीरताका साथ लिन पनि दलहरुलाई पुनः आग्रह गरेका..
उपभोक्ता ठगेको भन्दै म्यागीलाई १० अर्व जरिवानाको माग
एजेन्सी । म्यागी चाउचाउमा अधिक मात्रामा लीड ९सिसा० पाइएको विवादमा फसेको नेस्ले इन्डियालाई भारत सरकारले १० अर्व रुपैयाँको जरीवानाको माग गरेको छ। कम्पनीले अनुचित व्यापार गरेको, विज्ञापनहरुको मार्फत उपभोक्तालाई भ्रमित गराएको..
​आज पनि सुनको भाउ तोलामा सातसयले बढ्यो, चाँदी पाँच रुपैयाँले
काठमाडौं । यो हप्ताको सुरुदेखि नै उकालो लाग्न थालेको सुनको भाउ बुधबार पनि बढेको छ । बुधबार एकैदिन सुनको भाउ तोलामा सातसय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार..
मंगलबार सुन पाँचसय रुपैयाँले बढेर ४८ हजार दुईसय रुपैयाँमा किनबेच
काठमाडौं । सुनको भाउ एकै दिन पाँचसय रुपैयाँले बढेको छ । निरन्तर ओरालो लागेर ४७ हजार पाँचसय रुपैयाँसम्म झरेको सुनको भाउ मंगलबार पाँचसय रुपैयाँले बढेको हो । मंगलबार सुनको भाउ ४८..
​सुनको कोटा बढ्यो, अब बैंकहरुले दैनिक २० किलो सुन किन्न सक्ने
काठमाडौं । बजारमा सुन अभाव हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात कोटा पाँच किलोले बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधि–२०६८ अनुसार आयात हुने सुनको..
काठमाडौं । पेय पदार्थ कोका-कोलाको ‘फेरी उठ्ने छ नेपाल’ अभियान औपचारिक रुपमा सुरुवात भएको छ । माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले सोमबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमबीच अभियानको सुभारम्भ गरिन् । विनाशकारी भूकम्पबाट..
​सुनको भाउ तोलाको दुईसय बढ्यो, ४७ हजार सातसयमा कारोबार
काठमाडौं । हप्ताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ दुईसय रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो हप्ता स्थिर देखिएको सुनको भाउ यो हप्ताको पहिलो दिन भने बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका..
​कल्याणकारी कोषको रकम जलविद्युतमा लगानी गर्न अध्ययन गर्दै सेना
काठमाडौं । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा २०७२ असार मसान्तसम्ममा ३४ अर्ब चार करोड ८३ लाख पुगेको छ । कोष अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा गरिएको लगानी तीन अर्ब ७० करोड १७ लाख..
काठमाडौ । भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण प्रविधिको विषयमा जानकारी दिन ‘सुरक्षित भवन प्रदर्शन’ आजदेखि स्थानीय भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । सेन्थेसिस एक्जिबिसन एन्ड इभेन्ट प्रालि र एसडी प्रोमो मिडियाको संयुक्त आयोजनामा..
Results 889: You are at page 26 of 30